San Mateo Colleges - Crown Education
College of San Mateo, Skyline College နှင့် Cañada Collegeသုံးခုကိုပေါင်းပြီး San Mateo Colleges လို့ခေါ်ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ College of San Mateo, Skyline College နဲ့ Cañada College ကျောင်း(၃)ကျောင်းလုံးဟာ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် ၊ San Francisco Bay ဧရိယာအတွင်းတည်ရှိပါတယ်။
■ San Mateo Colleges မှာ ဘယ်လိုဘာသာရပ်တွေသင်ကြားနိုင်လဲ?
San Mateo Collegesမှာ ဘာသာရပ်စုစုပေါင်း (၆၇)ခုသင်ကြားနိုင်ပြီး Political Science, Architecture, Engineering, Computer Science, Digital Arts & Animation, Automotive Technology, Business Management, Economics, Film, Art & Design ဘာသာရပ်တွေက တက်ရောက်မှုအများဆုံးဘာသာရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
■ San Mateo Collegesရဲ့ တစ်နှစ်စာသင်စရိတ်နဲ့ တက်ရောက်ခွင့်ရဖို့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲ?
San Mateo Colleges(College of San Mateo, Skyline College နဲ့ Cañada College )တွေမှာ တက်ရောက်သူတွေအနေနဲ့ တစ်နှစ်စာ စာသင်စရိတ်-USD 6,300 ဝန်းကျင်သာကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး မိမိတို့၏ပညာအရည်အချင်းအလိုက်( ၁ဝဝ%၊၇၅%၊၅ဝ%)ပညာသင်ဆုတွေကိုပါ လျှောက်ထားနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။
San Mateo Collegesမှာ တက်ရောက်လိုသူတွေအနေနဲ့ ACT/SATရမှတ်မဖြစ်မနေရှိထားရန်မလိုဘဲ မြန်မာဆယ်တန်း/iGCSE O’ levelရမှတ်နဲ့ IELTS(5.5)ရမှတ်ပြင်ဆင်ပြီး လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။